जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो श,क्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने द,र्शनको लागी !ॐ – Taja Khawar
जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो श,क्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने द,र्शनको लागी !ॐ
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ समय: १:०५:४१
June 2, 2021GoodmamLeave A CommentOn जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो श,क्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने द,र्शनको लागी !ॐ
तस्वीर हो गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ आँपचौरमा रहेको कोटेश्वर महादेव मन्दिरको ।अहिले पनि सो मन्दिरमा गुल्मी,अर्घाखाँची बाग्लुङ,पाल्पा, प्युठान, रुपन्देही, कपिलवस्तु लगायत नेपालका धेरै जिल्ला हरुबाट श्रद्धालु भक्तजनहरु पुजापाठको लागी त्यहाँपुग्ने गर्दछनत्यस मन्दिरमा जे बर मागे पनि पुग्छ भन्ने जनबिश्वास रहिआएको छ ।
तपाई पनि सक्नुहुन्छ भने एकपटक सो मन्दिरमा दर्शनको लागी आउनु होला “‘
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि,ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं,गलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन ।
बेवास्ता गरेमा “अशुभ” हुन सक्ला । एकमुखे रुद्राक्ष यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक पनि मानिन्छ । अत्यन्तै दु’र्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ ।
Last Updated on: June 4th, 2021 at 1:05 am